ㆍISBN : 9788928209781
ㆍPáginas : 459
Kururama kwaMwari uko kunoratidzwa muna VaRoma - ISHE Vedu avo Vanove Kururama kwaMwari (Ⅱ)
Kururama kwaMwari kwakanyatsojeka, uye kwakatosiyana nekururama kwevanhu venyama. Kururama kwaMwari kunoratidzwa muevhangeri yemvura noMweya, iyo yakazadziswa nekubhapatidzwa kwaJesu naJohane, uye neropa rake paMuchinjikwa. Tinofanira kudzokera pakutenda kuri mukururama kwaMwari, tisati tanonoka.
Unoziva here chikonzero chakaita kuti Jesu abhapatidzwe naJohane Mubhapatidzi? Kana dai Johane akanga asina kubhapatidza Jesu, zvivi zvedu zvingadai zvisina kuturikwa paari. Johane Mubhapatidzi wakanga ari mukuru pavanhu vose vakaberekwa nevakadzi, uye rubhapatidzo rwaakapa kuna Jesu rwakanga rwuri faniro yakakwana yaMwari, yekuti zvivi zvedu zviturikwe pana Jesu.
Jesu akabhapatidzwa kuti atakurire zvivi zvenyika pamafudzi ake, uye ropa rake rakadeuka paMuchinjikwa kuti aripire mubairo wazvo wose. Izvi zvinhu zvose zvakashandura kunzwisisa kwangu kwakare pamusoro pekurwara patsva, apo ndaingoziva nezveropa raJesu paMuchinjikwa badzi. Mwari, zvino, vakudzidzisai nezvekururama kwavo, kuti tinzwisise pamwe nokutenda zvakakwana mukururama kwavo. Ndinotenda Ishe pamusoro pemaropafadzo aya ose.
SN/06/Ch7-1_Mhinzo yeChitsauko 7 ChaVaRoma.mp3
1. SN/06/Ch7-1_Mhinzo yeChitsauko 7 ChaVaRoma.mp3
2. SN/06/Ch7-2_Kukosha kweKutenda KwaPauro：Batanidzwa naKristu Mushure Mekufa KuChivi.mp3
3. SN/06/Ch7-3_Chikonzero Icho Tichigona Kurumbidza Ishe.mp3
4. SN/06/Ch7-4_Nyama Yedu Iyo Inoshumira Nyama Badzi.mp3
5. SN/06/Ch7-5_Nyama Inoshumira Murairo weChivi.mp3
6. SN/06/Ch7-6_Vongai Ishe，Muponesi Wevatadzi.mp3
7. SN/06/Ch8-1_Mhinzo yeChitsauko 8 ChaVaRoma.mp3
8. SN/06/Ch8-2_Kururama kwaMwari，Kuzadziswa kweKururama Kunodiwa neMurairo.mp3
9. SN/06/Ch8-3_Ko muKristu Ndiyani？.mp3
10. SN/06/Ch8-4_Nokuti kufunga kwemunhu wechivi ndirwo rufu，asi kufunga kunotongwa noMweya ndiho hupenyu norugare.mp3
11. SN/06/Ch8-5_Kufamba Mukururama kwaMwari.mp3
12. SN/06/Ch8-6_Vadyi Venhaka yeHumambo hweDenga.mp3
13. SN/06/Ch8-7_Kudzoka Kwepiri kwaShe uye Humambo hweChuru-chemakore.mp3
14. SN/06/Ch8-8_Mweya Mutsvene Uyo Anobatsira Vakarurama.mp3
15. SN/06/Ch8-9_Zvinhu Zvose Zvinoitira Zvakanaka.mp3
16. SN/06/Ch8-10_Dzidziso Dzenhema.mp3
17. SN/06/Ch8-11_Rudo Rusingaperi.mp3
18. SN/06/Ch8-12_Ndiyani Angashinga Kumira Achitirwisa？.mp3
19. SN/06/Ch8-13_Ndiyani Achaparadzanisa Vakarurama Nerudo RwaKristu？.mp3
20. SN/06/Ch9-1_Mhinzo yeChitsauko 9 ChaVaRoma.mp3
21. SN/06/Ch9-2_Tinofanira Kuziva Kuti Kutemera-kare Kwakarongwa Mukati Mekururama KwaMwari.mp3
22. SN/06/Ch9-3_Zvakaipa Here Kuti Mwari Ade Jakobo？.mp3
23. SN/06/Ch10-1_Mhinzo yeChitsauko 10 ChaVaRoma.mp3
24. SN/06/Ch10-2_Kutenda Kwazvokwadi Kunouya Nokunzwa.mp3
25. SN/06/Ch11_Ko Israeri Ichaponeswa Here？.mp3
26. SN/06/Ch12_Vandudza Pfungwa Dzako Pamberi PaMwari.mp3
27. SN/06/Ch13_Raramira Kururama KwaMwari.mp3
28. SN/06/Ch14_Ngatiregei Kuramba Tichipana Mhosva.mp3
29. SN/06/Ch15_Ngatipararidze Evhangeri Pasi Pose.mp3